Fanampiana ny fiarahamonina : Tanora 28 isa nomen’i Printsy vavy Anne Angleterre mari-boninahi-bolamena -
AccueilRaharaham-pirenenaFanampiana ny fiarahamonina : Tanora 28 isa nomen’i Printsy vavy Anne Angleterre mari-boninahi-bolamena
Taorian’ny nandraisan’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, ny Printsy vavy Anne Angleterre teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, ny 23 oktobra lasa teo, dia nisy ny lanonana fanomezana mari-boninahi-bolamena iraisam-pirenena ny tanora, na ny « Mérite d’or international de la jeunesse », ka tanora malagasy miisa 28 no nisitraka izany, izay notolorana mari-pankasitrahana « The Duke of Edinburgh’s International Awards”. Ireo tanora ireo, izay miasa eny anivon’ny fikambanana tsy miankina « Manda », ary misahana indrindra ny famerenana ireo tanora avy eny anivon’ny fokontany iva eny anivon’ny fiarahamonina indray.
Ny Filoha Rajaonarimampianina Hery, izay nisaotra ireo tanora ireo ihany koa, sady nanararaotra ireo miasa eny anivon’ny fitondram-panjakana amin’ny fampivoarana ny tanora malagasy. « Mitovy fomba fijery isika amin’ny fanomezana lanja ny maha harena ny tanora. Ny zava-bitan’ireo tanora ireo, izay manampy ny tanjona lehibe ho an’ny firenena eo amin’ny fanatrarana ny fampandrosoana lovain-jafy, fa indrindra ho amin’ny fiainana tsara kokoa », hoy ny fanambaran’ny Filoha.
Ny « Mérite International pour la jeunesse » moa dia noforonin’ny Printsy Philippe, Duc d’Edinburgh, tamin’ny taona 1956, izay entina ampirisihina ireo tanora hampivelatra ny fitiavany manampy ny fiarahamonina, ny fitiavany maka traikefa, sy ny fitiavany mikaroka zava-baovao entina hanatsarana ny fiainana. Eo ihany koa ny fitiavan’ny tanora hetsika ara-batana sy ny fanaovana fanatanjahantena. Raha ho an’i Madagasikara manokana, ny tanjon’ny « Mérite International pour la jeunesse » dia ny mba ahafahan’ireo tanora miisa 4000 mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena mandra-pahatonga ny taona 2020. Marihina moa fa firenena 140 isa maneran-tany no ahitana ny « Mérite International pour la jeunesse », ary efa nanampy tamin’ny fanatsarana ny fiainan’ny tanora maherin’ny 6 tapitrisa.
Nandritra ity lanonana ity ihany koa, dia notoloran’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara mari-pankasitrahana ny « Grand-Croix de Deuxième Classe de l’Ordre Nationale Malgache » ny Printsy vavy Anne Anglettere. Izay marihina fa ity ny mari-pankasitrahana ambony indrindra eto amin’ny firenena.